शेयरमा लगानी गर्दा संयमित हुनु पर्दछ – दुर्गाप्रसाद काफ्ले, सेयर लगानीकर्ता – Maitri News
शेयरमा लगानी गर्दा संयमित हुनु पर्दछ – दुर्गाप्रसाद काफ्ले, सेयर लगानीकर्ता
धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा हतारिन नहुने र सुझवुझ अपनाउनुपर्ने पुराना लगानीकर्ता दुर्गाप्रसाद काफ्ले बताउँछन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नै सेयर बजारमा लगानी सुरु गरेका सेयर बजारलाइ पूर्णकालीन पेशाको रुपमा आत्मसात गरेका उनले पछिल्लो समयको सुधार भने धेरै समयसम्म टिक्ने कुनै आधार नरहेको बताए । आर्थिक सूचकहरूले सपोर्ट नगरे पनि सेयर बजार एकोहोरो बढिरहनु अनौठो भएको उनको तर्क छ । हाल आर्थिक सूचकहरू बजार वढ्ने वा घट्ने गरी परिवर्तन नभएको उनको तर्क छ । तर, नेपालको सेयर बजारमा धेरै चलखेल हुने भएकाले केहीले पनि ठूलो असर नगर्ने उनले बताए । करिब ८ वर्ष सेयर बजारमा सक्रिय भएर लगानी गरेका काफ्लेसँग बजारको पछिल्लो अवस्थावारे गरिएको कुराकानीः
सेयर बजार कता जाँदै छ ?
सेयर बजार तत्कालका लागि बढेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालका लागि बढ्ने अवस्था छैन । आगामी दिनहरूमा केही कम्पनीहरूको नयाँ निष्कासन पनि आउँदै छ । त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले बजारको सेयर बिक्री गरेर नै हो । साथै चैतमा अधिकांश कम्पनीहरूको हकप्रद सेयरमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पनि लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्ने भएकाले बजार तत्काल बढ्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहको चुनाव भएको खण्डमा बजार बढ्नसक्ने अवस्था हो । तर, समयमा चुनाव हुने स्थिति पनि देखिएको छैन । त्यसैले तत्काल नै सेयरमा लगानी बढाउन हतार नगरेको नै राम्रो हुन्छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्ने गरी सकारात्मक नभएको हुनाले केही समय अझै बजारलाई हेरेर बस्दा नै उपयुक्त हुन्छ । केही दिनदेखि देखिएको सुधारलाई बजारमा चलखेल सुरु भएको भन्न पनि सकिन्छ ।
बजारमा कस्तो चलखेल हुन्छ र ?
हाम्रो बजार बढ्ने वा घट्ने भन्ने थाहा नै हँुदैन । बजार बढ्न वा घट्न कुनै कारण पनि चाहिँदैन । बजारमा चलखेल भइरहेको छ । अहिले बजार वढेर २ हजार पुगे पनि एक हजारमा झर्छ । बिनाकारण फुलेको बजार टिक्दैन । अर्थतन्त्र सुधार भएको छैन । रेमिट्यान्सको आप्रवाह घटेको छ । बजारमा चलखेल भन्नाले एउटा समूहले एउटा हल्ला फैलाउँछ त्यसको पछि दौडने लगानीकर्ता धेरै छन् । हल्लाको भरमा सेयर किन्ने तथा बिक्री गर्ने निर्णय गर्ने लगानी भएकाले चलखेल गर्ने समूह हावी देखिएको हो । विश्लेषण गरेर कम्पनी छानेर लगानी गरेको खण्डमा चलखेल नियन्त्रणमा आउँछ ।
भनेपछि अझै सेयर किन्ने समय भएको छैन ?
यहाँ निरन्तर बढेर १८८१ अंकमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) परिसूचक कालो धन प्रमुख कारण थियो । त्यसलाइ छानबिन गर्ने कुराले नै बजार उच्च अंकले घटेको थियो । तर, पछि त्यो कुरामा कसैले चासो दिएन । कालो धन र बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाका कारण उचालिएको बजार घट्ने त निश्चित थियो । हाल मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने सेयर किन्ने तथा बिक्री गर्ने केही गरेको छैन । हेरेर बसेको छु । चैतपछि सेयर बजारको लगानी वढाउने सोचमा छु । तत्कालका लागि बजारमा सानासाना हल्ला बढाउने घटाउने काम हुन्छन् । तर, त्यसले दीगो रूप लिन सक्दैन ।
सेयर बजारमा लगानी गर्दा जोखिम कत्तिको छ ?
पछिल्लो समयमा सेयर बजारको प्रतिफलभन्दा पनि बैंकमा निक्षेप राख्दा आउने प्रतिफल धेरै देखिन्छ । बजार सुधारको गतिमा हुँदा कर्जा लिएर लगानी गर्दा पनि नाफा नै हुने अवस्था थियो । सेयर बजारलाइ विगत ८ वर्षदेखि नजिकबाट हेर्दै आएको छु । त्यो समयमा कम्पनी विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा पनि खासै फरक परेको देखिनँ । बढ्दो क्रममा कमजोर कम्पनी र बलियो मानिएका कम्पनी दुवैको सेयर मूल्य वढेको छ । घट्ने अवस्थामा पनि दुवै कम्पनीको घटेको छ । त्यसैले कम्पनी छानेर लगानी गर्दा पनि बढ्दो समयमा राम्रो देखिने भए पनि घट्दा काम गरेको छैन । समान्यतया मैले सेयरमा लगानी गर्दा कम्पनीको आम्दानीको बिगतको अवस्था र वर्तमान हेरर निर्णय गर्छु ।
सेयर बजारको पोर्टफोलियो कसरी व्यवस्थापन भएको छ ?
केही समयअघि लगानीको ठूलो हिस्सा सेयर बजारमा मात्र केन्द्रित थियो । तर, हाल सेयर बजारमा धेरै लगानी छैन । त्यसैले पनि योजनावद्ध रूपमा लगानी व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि बजारसँग नियमित रुपमा जानकार भइ लगानी गर्ने गरेको छ । तत्कालका लागि त मैले भनिसके लगानी गर्ने वा बिक्री गर्ने केही गरेको छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओ तथा एफपीओको समय छोट्याउने विषयमा तपाइँलाइ कस्तो लाग्छ ?
वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानमा बोर्डले चासो राख्नु ठिक हो । तर, समयअवधिभन्दा अघि बाँडफाँड गर्न भनेर अर्को कम्पनीलाई नयाँ निष्कासन अनुमति दिने निर्णय गर्नु सही होइन । यस विषयमा धितोपत्र बोर्डको निर्णय स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकको नयाँ निष्कासनका लागि पैसा जुटाइदिएको जस्तो देखिन्छ । यो ठिक भएन । बजारमा हुने चलखेलको विषयमा साना लगानीकर्तालाई थाहा भएको अवस्था छैन । बजार घट्दै गएको खण्डमा बैंकहरूमा पनि समस्या आउँछ । सेयर बजार धेरै कर्जामा चलेको छ । मुख्य लगानीकर्ताहरू कर्जा लिएर लगानी गरेको अवस्था हो ।
पछिल्लो समय लगानीकर्ताको दृष्टिकोणवाट कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
बजारका सन्दर्भमा केही सुधार पक्कै भएको छ । काठमाडौंभन्दा बाहिर सेयर कारोबार हुने अवस्था अझै पनि छैन । त्यसलाई पहिले सुधार गर्नुपर्छ । हल्ला धेरै भए तर काम थोरै भएका छन् । लगानीकर्ताका संगठनहरू पनि बजार घट्दा आन्दोलन गर्ने मात्र गर्छन् । ब्रोकरलाई देशव्यापी बनाउने र अनलाइन कारोबार प्रणाली गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ ।